एमाले विवाद समाधानका लागि कार्यदलको बैठक आज बस्दै — Imandarmedia.com
११० बुँदे जान्दिनँ, ओलीलाई मान्दिनँ’ – नेता नेपाल
३१३ हजार ५१९ परीक्षण गर्दा ३ हजार १०६ जनामा कोरोना संक्रमण, थप २३ को मृत्यु
४भारतमा मध्यराति भ’यानक दु’र्घटना, १८ जनाको मृत्यु
५जसपा संसदीय दलको नेतामा कसले मार्दैछ बाजी , सबैलाई चकित पार्दै आयो यस्तो जानकारी
६अझै जसपामै छौँ भन्नु राजनीतिक बेइमानी – यस्तो छ महन्तको भित्रि चाल
७भूटानसँग नेपालको तुलना गर्दै मोदीले किन गरे यस्तो ट्वीट ? सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
८जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा प्रजिअकोे मनपरि ?
९उपेन्द्र यादवले सरकारमा जान खुट्टा उचालेपछि महन्थ ठाकुरले गरे झन् ठूलो तयारी
१०१८ अर्ब रुपैयाँको ड्रग्ससहित समातिएका ओलम्पिक पदक विजेता खेलाडीलाई २५ वर्ष जेल
११प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारलाई चेतावनी एमसिसी सम्झौता सबै कागजात संसदमा पेस गर्न माग
१२नेपालको कुनै पनि शोरुममा नपाइने पूर्वयुवराज पारसले चढ्ने बाईकको मूल्य कति ? थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ
एमाले विवाद समाधानका लागि कार्यदलको बैठक आज बस्दै
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ । आज विहान साढे ८ बजेका लागि बोलाइएको बैठक दुई घण्टा पछि सारेर साढे १० बजे बस्ने एमाले नेता भीम रावलले जानकारी दिए ।
सिंहदरबारमा भएको हिजोको बैठकमा सहमतिका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भएपनि ठोष निष्कर्ष निस्किन सकेको थिएन । आजको बैठकमा आन्तरिक समस्याका विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल हुने कार्यदल सदस्य समेत रहेका नेता रावलले बताए ।
उनले मंगलबारको बैठकमा सहमतिका लागि अघि सारिएका विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भएको र छलफल सकारात्मक बताए । उनले समस्या समाधानका लागि कार्यदलमा उठेका विविध धारणाहरुका विषयमा आजको बैठक केन्द्रित हुने बताए ।
‘हाम्रा आन्तरिक समस्या गम्भिर रुपमा विश्लेषण गरेर आजको बैठकमा छलफल अगाडि बढाउँछौं,’ नेता रावलले भने, ‘ विमति भएका विषयमा विभिन्न कोणबाट आज पनि छलफल हुनेछ ।’
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षबाट ५ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबाट ५ गरी १० सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा ओली पक्षबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू प्रदीपकुमार ज्ञवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल छन् ।
यसैगरी नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त छन् । नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सफल हुन नसकेपछि गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन भएपछि एमालेको कार्यदल निष्क्रिय भएको थियो ।
यसअघि सोमबार पनि कार्यदलबीच छलफल भएको थियो ।
१० बुँदे जान्दिनँ, ओलीलाई मान्दिनँ’ – नेता नेपाल
केपी ओलीले छलछाम गरिरहेको भन्दै, बालकोट गएर रुवाबासी नगर्न माधब नेपालको चेतावनि !
एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ, लागु हुनुहुँदैन : भीम रावल
महन्थ ठाकुरको पेशी पनि आजै, खतिवडा र चुडालको हातमा राजनीतिक भविष्य
केपी ओलीले बनाए महन्थ र राजेन्द्रको बेहाल, के छ भित्रि रहस्य ?
तिन तिरबाट सत्तारुढ गठबन्धनको प्रहार, चक्रव्यूहमा मुख्यमन्त्री पोखरेल
चुनावमा एमाले र माओवादी मिल्ने सम्भावना छ- ज्ञवाली